जन्मिदै धन कमाउने योग लिएर आउछन् यी ३ राशि ! – Krazy NepaL
December 8, 2021 390
तपाईलाइपनि अनौठो लागेको हुनुपर्छ कसैले कलिलै उमेरमा ह्वात्तै पैसा कमाउन थाल्छन् । उदाहरणका लागि अशोक दर्जी, सचिन परियाल, कमला घिमेरेहरु हेर्नुहोस् न भाडाकुटी खेल्ने उमेरमा नै पैसा र नाम कमाउन थाले । यो उनीहरुले जन्मिदै लिएर आएको योग हो । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट हुन्छ । राशि जन्मिएको समयमा निर्धारित हुन्छ । तपाईको जन्म कुन कोखबाट भयो भन्ने हैन कुन समयमा भयो भन्ने प्रमुख कुरा छ । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागि पनि राशि आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले १२ वटा राशिहरु मध्ये यी ३ राशिहरु भएको मानिसहरु चाहि एकदमै भाग्यमानी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले सानै उमेर देखि नै सुख , शान्ति र धेरै धन आर्जन गर्ने हुन्छन् । कन्या राशि:यो राशि हुने ब्यक्ति अरु राशिहुनेहरु भन्दा बिलकुलै फरक हुन्छन् । किनभने उनीहरुसगँ आत्म विश्वास र कठोर परिश्रम र हरेक काम गर्नु पूर्व सोचेरमात्र काम गर्ने भएकाले यस्तो शुभ रहेको छ । जो एकदमै भाग्यमानी हुन्छन् ।
वृष राशि:यो राशि हुने मानिसहरु पनि सधै जीवनमा छिट्टै सफलता हात पार्ने हुन्छन् । किनभने यो राशि हुनेहरु शान्त , आफ्नो निर्नयमा अडिग रहने , मेहनती र जस्तो सुकै दुखमा पनि बाच्ने भएकाले यो राशि हुने ब्यक्तिले प्रशस्त धन आर्जन गर्छन् । धनु राशि:यो राशि हुने मानिसहरु पनि अत्यन्तै सालिन स्वभावका मिहेनती हुनाले प्रशस्त धन कमाउने हुन्छन् । किनभने हरेक काम गर्दा नया नया तरिका अपनाएर काम गर्नुको साथै थोरै पैसालाई जम्मा गरेर धेरै बनाउने हुन्छन् ।
यसैगरी मानव जीवनमा ज्योतिष शास्त्रले यस्ता केहि नियमहरु बनाएको छ जो बेवास्ता गरे नकारात्मकता फैलन्छ । शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ की साना साना बेवास्ताले हामीलाई हाम्रो जीवनमा असर गर्न गरिरहेको हुन्छ । यसैले हानी नोक्सानी भइरहेको हुन्छ ।तर भनिएका नियम अनुसार गरे जीवनमा प्राप्ति नै प्राप्ति हुन्छ । उदाहरणका लागि भगवान विष्णुको बिहीबार पूजा गरिन्छ । यससँग सम्बन्धित केही विश्वासहरू पनि छन् । भगवान विष्णुलाई आधार बनाएर राखिएका केही नियमहरु छन् । ती नियम उलंघन गर्दै बर्जित गरिएका काम गरे तपाईलाई हानी हुनेछ ।
बिहीबार यी घरका कामहरू त्याग्नुहोस्:जसरी बृहस्पति ग्रहले हाम्रो शरीरसँग सम्बन्धित काम गर्दछ । त्यसको शक्तिलाई हानी हुने काम रोक्नुपर्छ । लुगा धुने, सफा गर्ने, घरमा कपाल कोर्ने आदिले तपाईंको बृहस्पति ग्रहमा बढी प्रभाव पार्दछ। वास्तुका अनुसार यो विश्वास गरिन्छ कि हाम्रो घरको उत्तर पूर्वी दिशा बृहस्पति हो। यो अधिपती ग्रह हो। साथै यो दिशा परिवार, शिक्षा, धर्म र बच्चाहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले बिहीबार यी कार्य गर्नु हुँदैन । अन्यथा तपाईंको बच्चा, शिक्षा र धर्मले अशुभ प्रभाव पार्छ।
महिलाले आफ्नो कपाल धुनु हुँदैन:धर्मशास्त्रका अनुसार यो विश्वास गरिन्छ कि महिलाहरूले यस दिन आफ्नो कपाल धुनु हुँदैन । किनभने बृहस्पति महिलाको कुंडलीको पति र साथ साथै बच्चाहरूको पनि कारक हो । यस कारणले यस दिन कपाल धुँदा बृहस्पति ग्रह कमजोर हुन्छ । यस कारणले शुभ कार्य भइरहेको छ भने मात्र अन्यथा भुलेरपनि कपाल धुनु हुन्न । यस दिन कपाल काट्नु हुँदैन । जसले बच्चा र पतिको जीवनमा प्रभाव पार्दछ। उनीहरूको प्रगतिमा बाधा आउछ।
खानका लागि जनावर नलिनु:यस दिन पशुलाई क्षति असर गर्ने समेतका कार्यहरु गर्नु हुन्न । खानका लागि तयार पार्नु त झनै गलत सावित हुनु हो ।कालो लुगा लगाउनु हुँदैन:यस दिन तपाईले गाढा रंगको वा कालो कपडा लगाउनु हुँदैन । पहेलो कपडा लगाए यसले तपाईमा सकारात्मकता जगाउँदछ। तपाईं शनिबार कालो लगाउन सक्नुहुन्छ। बिहीबार कालो भुलेरपनि नलगाउनुहोस् ।
बिहीबारको पूजा:बिहीबार बिहान नुहाउनुहोस् र बिहीबार भगवान बिष्णुको पूजा गर्नुहोस्। पूजामा पहेंलो बस्तु, पहेंलो फूल, चना दाल, सुख्खा अंगुर, पहेंलो मिठाई, पहेंलो चामल र हल्दी प्रयोग गर्नुहोस्। यस दिनमा केराको रूखको पनि पूजा गरिन्छ। कथा पढ्दा र पूजा गरेको समयमा तपाईंको मनको ईच्छाको पूर्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। पानीमा हल्दी थप्नुहोस् र यसलाई केराको रूखमा राख्नुहोस् र केराको जरामा चना दाल र सुख्खा अंगुरहरू चढाउनुहोस् । यसको नजिक बत्ती बालेर केराको रूखको आरती बनाउनुहोस्। बिहीबार उपवासमा, एक दिनमा एक पटक मात्र खानुपर्दछ। पूजा पछि भगवान बिष्णुको बिहिबारको कथा सुनु पर्छ।
Prevयी ५ रोग जरैदेखि निको पार्न खानुहोस् काँचो पनिर, आफैं देख्नुहुनेछ चमत्कार ! सबैले जानीराखौं
Nextअनुहारको पुरानो दाग धब्बालाई यसरी हटाउनुहोस्, अनुहारमा आउनेछ चमक !